အဆိုပါပုံဆွဲစစ်ဆင်ရေးထွက်တင်ဆောင်လာသောအတွက်အလွန်ဘုံနှင့်လိုအပ်သော - သီးခြားဒြပ်စင်သို့လုပ်ကွက် Breaking ။ သင်ယူနစ်မှစသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆိုပါစို့, ဒါပေမယ့်သူကကိုဖယ်ရှားနှင့်အသစ်ဆွဲ - ဆင်ခြင်မဲ့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တစ်ဦးချင်းဒြပ်စင်တည်းဖြတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ function ကို "ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်" ယူနစ်ရှိ၏။
AutoCAD: တစ် JPEG, အဖြစ်ပုံဆွဲ Save
AutoCAD အတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်အခါတစ်ဦးအကြောင်းအရာအကြမ်းပုံစံအတွက်ပုံဆွဲကယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကွန်ပျူတာကို PDF စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုဖတ်နေဘို့ program တစ်ခုမဖွစျနိုငျကွောငျးတကယ်တော့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ငယ်ဖိုင်အရွယ်အစား၏မျက်နှာသာအတွက်လစျြလြူရှုနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျ JPEG, ရန် AutoCAD ဆွဲပြောင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ A360 Viewer ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
ကျွန်တော်ယခင်ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြထားသောသကဲ့သို့, AutoCAD dwg ၏ဇာတိ format နဲ့အခြားပရိုဂရမ်အားဖြင့်ဖတ်ပါနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဤအစီအစဉ်အတွက် created အမြင်ပုံဆွဲရန်, AutoCAD ၏ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ A360 Viewer ကို - AutoCAD, Autodesk ၏ developer အသုံးပြုသူများကိုရေးဆွဲမြင်နိုင်ရန်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
အတော်များများကကျွမ်းကျင်သူများကရူပါရုံကိုအပေါ်အောက်သာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အဖြစ်, မှောင်မိုက်နောက်ခံမော်ဒယ်သုံးပြီး AutoCAD ၏အလုပ်လုပ်မှကြိုက်တတ်တဲ့။ ဒါကနောက်ခံ default အနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်တို့ကိုမှန်ကန်စွာအရောင်ပုံဆွဲပြသနိုင်ရန်အတွက်ဥပမာ, အလင်းကပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
AutoCAD အတွက် keyboard shortcuts
ပုံဆွဲများအတွက်အစီအစဉ်များအတွက် keyboard shortcuts တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အထင်ကြီးမြန်နှုန်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ်စတှငျ AutoCAD မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့သော့ကို အသုံးပြု. ဆွဲဖျော်ဖြေအလိုလိုသိနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်လာသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပူသော့များ၏ပေါင်းစပ်အဖြစ် AutoCAD အတွက်သူတို့ရဲ့ချိန်း၏နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ။
AutoCAD အတွက် proxy ကိုအရာဝတ္ထုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဒြပ်စင်ဆွဲအဆိုပါ AutoCAD အတွက် proxy ကိုအရာဝတ္ထုပုံကြမ်းများသို့မဟုတ်အခြားအစီအစဉ်များအနေဖြင့် AutoCAD ပတ်ဝန်းကျင်သို့တင်သွင်းအရာဝတ္ထုများအတွက် Third-party applications များဖြင့်သမုတ်ကြပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ proxy ကိုအရာဝတ္ထုကိုမကြာခဏ AutoCAD ၏အသုံးပြုသူများပြဿနာများရှိုးနေကြသည်။ သူတို့က disk space ကိုအများကြီးတက် ယူ. RAM ကိုတစ်ဦးအချိုးအစားမညီမျှမှုငွေပမာဏကိုသုံးရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိသည်, edited မဟုတ်, ကူးယူမည်မဟုတ်ပါ။
AutoCAD အတွက် frame ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
- မဖြစ်မနေဒြပ်စင်စာရွက်ဆွဲအလုပ်လုပ်။ မူဘောင်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုစုစည်း system ကိုဒီဇိုင်းစာရွက်စာတမ်းများ (ESKD) ၏စံချိန်စံညွှန်းများကအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။ frame ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက် - တပုံဆွဲဒေတာ (အမည်, စကေး, အဆိုတော်, မှတ်စုများနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်) ဆံ့။ ဤသင်ခန်းစာတွင် AutoCAD အတွက် drawing အခါဘောင်အောင်ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည်။
မှားယွင်းနေသည် 1606 AutoCAD ကို install အခါ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရန်
«မှားယွင်းနေသည် 1606 ကွန်ရက်တည်နေရာ Autodesk ရယူမပေးနိုင်ခဲ့ပါ»: AutoCAD installation ကိုအမှားကို install မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသသောဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအတော်များများအသုံးပြုသူများသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မည်သို့နားလည်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကို install မလုပ်ခင် AutoCAD install လုပ်သည့်အခါအမှား 1606 fix ဖို့ကိုဘယ်လို, သင်စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် installer ကို run ကြောင်းသေချာပါစေ။
Hatch အဆက်မပြတ်ရေးဆွဲရေးအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ dashed ပုံအဆာမရှိရင်သင်သည်မှန်ကန်စွာအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ယင်း၏ textured မျက်နှာပြင်၏အပိုင်းဆွဲပြသနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤဆောင်းပါး၌, ရဲ့ AutoCAD အတွက်ပေါက်အောင်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ လည်း AutoCAD ကြည့်ရှုတစ်ပေါက်အောင်ဘယ်လို: AutoCAD 1 မှာဖြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို။
AutoCAD အတွက် drawing စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း edited ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးမျိုးစုံလိုင်း segments များပါဝင်ပါသည်။ ကတစ်ခုတည်းအရာဝတ္ထုသို့အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့လိုင်းများပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်အချို့ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့ကိုကို select နှင့်အသွင်ပြောင်းဖို့အတှကျပါစေ။ ဤသင်ခန်းစာတွင်သင်အရာဝတ္ထုများ၏လိုင်းများပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်လိုင်းများကိုခိုင်မာအောင်စတင်ခင်မှာ AutoCAD အတွက်လိုင်းပေါင်းစပ်ဖို့ကိုဘယ်လို, ကသာစည်းလုံးညီညွတ် "polylines" (ကိုမကူးအဆက်အသွယ်အမှတ်ရှိခြင်းနိုင်သည်ကိုသတိပြုရကျိုးနပ်ပါ!
AutoCAD အတွက် image ကိုထားရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးဆွဲ program နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါမကြာခဏပြုပြင်လယ်ပြင်၌ရှိသော bitmap နေရာလိုအပ်ပါသည်။ ဒီအပုံကိုဒီဇိုင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုမော်ဒယ်အဖြစ်အသုံးပြု, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးပုံဆွဲ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒါကြောင့် AutoCAD နဲ့အခြားအစီအစဉ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်အဖြစ်ကိုပြတင်းပေါက်၌ပြတင်းပေါက်အထဲကဆွဲဆိုလိုတယ်ပုံထားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
AutoCAD အတွက် drawing Vektoriziruem
အဆိုပါပြောင်းလဲခြင်း Draw Digitizing သမားရိုးကျပုံဆွဲကာအီလက်ထရောနစ် format နဲ့, စက္ကူပေါ်မှာလုပ်ပါဝငျသညျ။ vectoring နှငျ့အလုပျလုပျအမှုတော်တို့ကိုတစ်ဦးအီလက်ထရောနစ်စာကြည့်တိုက်၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းများ, ဒီဇိုင်းနှင့်စာရင်းအေဂျင်စီများ၏မော်ကွန်းတိုက်၏မွမ်းမံနှင့် ဆက်စပ်. လက်ရှိအချိန်တွင်အတော်လေးရေပန်းစားသည်။
AutoCAD software ကိုတစ်ဦးဆွဲပေါ်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ဒြပ်စင်၏အသုံးများလုပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုံဆွဲစဉ်အတွင်းတချို့လုပ်ကွက်အမည်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပေမည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု editing tools အားဖြင့်သင်တို့ကို၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်လို့မရဘူး, ဒါကြောင့်ယူနစ်အမည်ပြောင်းရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျနော်တို့ AutoCAD အတွက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုအမည်ပြောင်းရန်လမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အပုံဆွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးဂုဏ်သတ္တိများပြသဘို့လိုင်းများအမျိုးမျိုးနှင့်အထူလိုအပ်သည်။ AutoCAD အတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်, သင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းထူသို့မဟုတ်ပိုမိုပါးလွှာခြင်းဖြင့်ရေးဆွဲတစ်လိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အလေးချိန်အစားထိုးလိုင်း AutoCAD အသုံးပြုခြင်း၏အခြေခံကိုရည်ညွှန်းသည်, ဤမျှကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။
AutoCAD သို့တင်သွင်း Images ကိုအမြဲယင်း၏အပြည့်အဝအရွယ်အစားမလိုအပ်ပါ - သာသေးငယ်တဲ့ဧရိယာပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပျနိုငျသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြီးမားတဲ့ပုံရေးဆွဲ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။ အသုံးပြုသူကိုချုံ့ပိုမိုရိုးရှင်းစွာ, image ကိုဖြတ်တောက်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးမဖြစ်မနေအင်္ဂါရပ်တစ်ခုသော graphical ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကိုရှိပါတယ်ရာ - ကွဲပြားခြားနားသောအကြေးခွံထဲမှာပုံဆွဲပြသပေးပါတယ်။ ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက် projected Display ရဲ့အရာဝတ္ထုခွင့်ပြုနှင့်အလုပ်လုပ်ရေးဆွဲအတူစာရွက်များဖွဲ့စည်းရန်။ ယနေ့ကရေးစပ်ထားတဲ့၏ AutoCAD ဆွဲစကေးနှင့်အဆောက်အဦးများ, ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
AutoCAD toolbar ကိုအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလျှင်အဘယ်သို့ပြုသနည်း
ထို့အပြင်တစ်ဦးဖဲကြိုးဟုခေါ်သည်, အင်တာဖေ့၏အစစ်အမှန် "နှလုံး" ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဘာပဲအကြောင်းပြချက်များအတွက်မျက်နှာပြင်ကနေပျောက်နေလုံးကိုအလုပ်ရပ်တန့်နိုင်သည့် AutoCAD toolbar ကို။ ဤဆောင်းပါး AutoCAD အတွက် toolbar ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တက်ဖတ်ရန်: AutoCAD 1 ပေးရန် toolbar ကိုပြန်သွားဖို့ကိုဘယ်လို AutoCAD သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို။
AutoCAD command ကိုဦးတည်လျှောက်လွှာအတွက်မှားယွင်းနေသည်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရန်။
သငျသညျ AutoCAD start သည့်အခါလျှောက်လွှာပညတ်တော်တို့ကို၏ညှနျကွားမှုအမှားတခါတရံတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Temp ဖိုင်တွဲ၏ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုမှ၎င်းငျး, registry ကိုနှင့် operating system ထဲမှာအမှားများနှင့်အတူအဆုံးသတ် - ၎င်း၏အကြောင်းတရားများအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့သညျဤအမှားဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ထွက်တွက်ဆကြိုးစားပါ။ စလုပ်ဖို့ AutoCAD application ကိုမှပညတ်တော်တို့ကိုမပို့ရသောအခါ bug တွေကို fix ဖို့ကိုဘယ်လို, C ကိုကိုသွား: အသုံးပြုသူများ AppData ဒေသခံ Temp နှင့်စနစ်ခုံဖိနပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။
ဘယ်လို AutoCAD အတွက်ဖြည့်ကြဘူး
မကြာခဏအရည်အသွေးနှင့် Express သူတို့ကိုပိုပြီးဂရပ်ဖစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါရေးဆွဲများတွင်အသုံးပြုဖြည့်ပါ။ အဆိုပါပုံဆွဲဒြပ်စင်အချို့ကိုများသောအားဖြင့်လွှဲပြောင်းနေကြသည်ဖြည့်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိသို့မဟုတ်ပျေါလှငျအသုံးပြုခြင်း။ ဤသင်ခန်းစာတွင်, သင်ဖန်တီး AutoCAD အတွက်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို 1 ဖြည့်ပါ AutoCAD Drawing အတွက်ဖြည့်ကြဘူး။